Ka fogow in ay afduubayaal kaa noqdaan kuwa ku horumaraya | Martech Zone
Ka fogow in ay afduubayaal kaa noqdaan kuwa ku horumaraya
Monday, May 12, 2008 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Toddobaadkan dhammaadkiisa waxaan bilaabay wadahadal aan la yeeshay fannaan maxalli ah oo ka caawinaya saygeeda maareynta dhowr codsi oo mareeg ah oo uu leeyahay madaxdeeda.
Wadahadalku wuu soo jeestay oo xoogaa hagitaan ah ayaa ku saabsanaa bixinta khidmadaha horumarinta usbuuclaha iyadoo aan wax horumar ah laga arkin horumariyeha ay la shaqeynayeen. Hada horumariyaha ayaa doonaya inuu iyaga ka qaado lacag kale oo lacag ah si ay u dhamaystiraan mashruuca iyo sidoo kale ujrada dayactirka toddobaadlaha ah si ay u daboosho codsiyada kale. Way ka sii xumaaneysaa.
Horumariyaha wuxuu wareejiyay magacyada domain si uu u maareeyo. Horumariyaha ayaa sidoo kale ku martigeliya arjiga koontadiisa martigelinta. Marka la soo koobo, horumariyaha ayaa hadda afduub ku haysta.
Nasiib wanaagse, haweeneyda aan la shaqeynayo waxay dalbatay marin u helid maamul waqtigii la soo dhaafay si ay wax uga beddesho qaar ka mid ah feylasha qoraalka barta. Horumariyaha ayaa laga yaabaa inuu siiyo marinkeeda kooban laakiin isagu ma uusan bixin. Isaga (caajis) wuxuu siiyay iyada soo galitaanka maamulka ee goobta. Caawa waxaan adeegsaday marinkaas si aan ugu kaydiyo dhammaan koodhka goobta. Waxaan sidoo kale garwaaqsaday nooca softiweerka maareynta ah ee uu isticmaalayo waxaanan ku aaday dhanka maamulka keydinta macluumaadka halkaas oo aan awooday inaan ka dhoofiyo labada codsi ee xogta iyo qaabdhismeedka miiska. Whew.
Mulkiilaha ayaa qorsheynayay u wareejinta boggaga magacyada cusub ee magac marka la soo gabagabeeyo horumarka. Taasi way weyn tahay sababta oo ah waxay la macno tahay in domainsyada hadda jira ay dhici karaan haddii ay dhacdo in ay jirto kala-tag cadho leh oo u dhexeeya soo-saaraha iyo shirkadda. Hore ayaan u arkay tan oo kale.
Tilmaamaha qaarkood haddii aad u baahan tahay koox horumarineed oo dibadda ka timid:
Ku qor magacyadaada magacaaga magaca shirkaddaada. Ma xuma in horumariyahaagu noqdo Xiriir Farsamo oo ku saabsan koontada, laakiin marna u wareejinta lahaanshaha bogga cid kasta oo ka baxsan shirkaddaada.
Marti geli Codsigaaga ama Boggaaga
Way fiicantahay in soo-saarahaaga laga yaabo inuu leeyahay shirkad martigelin ah oo martigelin karta boggaaga adiga, laakiin ha sameynin. Taabadalkeed, weydii talooyinkiisa halka lagu qabanayo arjiga. Waa run in horumariyayaashu ay bartaan softiweerka maareynta, noocyada, iyo meesha ay ku yaalliin kheyraadka taasna waxay kaa caawin kartaa in badeecadaada si dhakhso leh loo dhammaystiro. Taasi waxay tiri, in kastoo, aad leedahay koontada martigelinta oo aad ku darto horumariyahaaga marin u gaar ah iyo marin u helitaankiisa. Sidan, waad jiidi kartaa furka markasta oo aad u baahato.
Ha u maleynin inaad adigu furaha leedahay, qoraal ku qor. Haddii aadan dooneynin horumariyahaagu inuu adeegsado xalka aad isaga / iyada ku siisay inuu ku horumariyo meel kale, waa inaad go'aansataa taas waqtiga heshiiska. Xal baan u soo saaray habkan laakiin sidoo kale waxaan ku soo saaray halka aan ku haysto xuquuqda koodhka. Xaaladda dambe, waxaan kala xaajooday kharashka dalabka mid ka hooseeya si ay jirto dhiirigelin ay shirkadda ii siiso xuquuq. Haddii aadan dhib ka qabin soo-saarahaaga inuu adeegsanayo lambarkaaga meel kale, markaa waa inaadan bixinaynin lacagta ugu sarreysa!
Hel fikrad labaad!
Waxba uma dhimeyso dareenkeyga markii dadka ay ii sheegaan inay dalabyo qaadayaan ama ay la tashanayaan xirfadlayaal kale. Xaqiiqdii, waan kugula talinayaa!
Qeybta ugu hooseysa ayaa ah inaad bixinayso hibada horumariyahaaga laakiin waa inaad ilaalisaa xakamaynta iyo lahaanshaha fikradda. Adigaa iska leh. Adiga ayaa maalgashaday, adigu waxaad halis u galisay ganacsigaaga iyo faa iidada aad u leedahay… waana adiga waa inaad ilaalisaa. Soo-saareyaasha waa la beddeli karaa taasina waa inaanay waligood khatar gelinin dalabkaaga, ama uga sii darin - ganacsigaaga.
Tags: xayeysiintaBluetoothalgorithm googlesms mobileprwebfarriinta qoraalka suuqgeyntaqoristawordpress sms isdhaxgalka
Ka dhig Mawduucaaga mid cusub! Oo ay ku jiraan Faallooyin
Kaalaynta Falanqaynta Webka
May 13, 2008 at 5: 04 PM
Anigu waxaan ahay horumariyaha barnaamijka shabakadda waana ku raacsanahay inta badan qodobbadaada (laga yaabee dhammaantood) laakiin waxaan jeclaan lahaa in la caddeeyo # 3.
Soo-iibinta jumlada ah ee bogga ama arji laga iibiyey shirkad kale (ama tartan xun) waa anshax xumo waana in marwalba lagu qeexaa sida aan loo aqbali karin qandaraaskaaga. Si kastaba ha noqotee, waxaan soo saaray xalal hal abuur leh oo ku saabsan dhibaatooyinka guud inta aan ka shaqeynayo mashruuca macmiilka oo aan shuqul ku lahneyn gaar ahaantooda sidoo kale ma mataleyso qeyb muhiim ah oo xalka guud ah.
Macmiilku wuxuu rabay heerka bogga iyo xakamaynta heerka garoonka oo ku xidhan doorarka isticmaalaha. Waxqabadka "sanduuqa ka baxsan" ee ASP.Net wuxuu sameeyaa rukhsadaha heerka galka. Marka waxaan ku dheeraaday rukhsadaha wadaniga ah ee .Net waxaanan geeyay xalka oo qayb ka ah guud ahaan codsiyada websaydhka.
Waxaan aaminsanahay inay xaq u leeyihiin dhamaan qodobka aasaasiga ah (sida ku xusan heshiiska) laakiin waxaan dareemayaa inay xaq tahay in la isticmaalo isla hababkii iyo qodobo koodh ah si aan ugu dhammaystiro kordhintan mashaariicda mustaqbalka.
Waxaan tan sameeyay markii ay beero iiga wadeen shirkad latalin ah. Shirkada la-talinta miyay xaq ku lahaan laheyd aragtidaada inay dib ugu laabato oo ay nuqul ka sameyso xalkaas, oo ay ugu suuq-gasho iyaga u gaar ah?
Agoosto 18, 2011 saacaddu markay ahayd 6:24 PM
Si aan macquul ahayn,
Waxaan u maleynayaa inaan isku raacnay. Ujeeddadayda tan ayaa ah inaan hubiyo inaad haysato lambarka oo aad uga bixi karto albaabka. Haddii horumariyahaagu kuu samaynayo lambar kuu ah oo aad u riixayso boggaaga - ma lihid lambarka. Waxaan arkay tan oo ku dhacaysa wax walba oo ka imanaya garaafyada, Flash, .NET, Java… wax kasta oo u baahan fayl galka oo la soo saaro.
May 13, 2008 at 5: 53 PM
Waan arkaa halkaad ka imaanaysid iyo inkasta oo aanan ku raacsanayn wax kasta 100% (Waxaan hayaa digniino), shirkadaha waa inay had iyo jeer maskaxda ku hayaan tan.
1. QAXDIR. Ma adkeyn karo tan. Waxaan la shaqeeyay shirkad yar oo tan sameysay waxaanan dareemay dambi weyn oo ku saabsan ku lug lahaanshahayga. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan awooday inaan halkaas ka baxo. Macaamiisha waa inay gabi ahaanba ilaashadaan kantaroolka goobahooda. Haddii ay haystaan ​​qof sifiican ugu fahma, ha u oggolaan horumariye inay tan ku helaan. Haddii kale, hubi in horumariyehu uu haysto waddo aad adigu ku beddelan karto macluumaadka / ku wareejinayso bogga adoo adeegsanaya interface reseller nooc ka mid ah ugu yaraan.
2. Qayb ahaan waan ku raaci lahaa tan laakiin markaa waxay kuxirantahay xaalada. Haddii aad dejineysid barnaamij fudud oo PHP ah oo aad u baahan tahay martigelin qiimo jaban, si kasta ha noqotee, hel xisaabta LunarPages ama DreamHost ama wax oo halkaa ku tuur. Sii horumariyaha marin. Si kastaba ha noqotee, martigelinta qiimaha jaban ee la wadaago hubaal waxay leedahay cillado s gaar ahaan waxyaabaha waaweyn. Laakiin haddii aad ku filan tahay inaad ka walwasho taas waa inaad haysataa qof farsamo ah oo shaqaale ah oo wax ka qaban kara. Inbadan oo kamid ah waxay iska cadahay aaminaada. Hubaal sida cadaabta wax u geliso qandaraas haddii aad ka awoodo waxyaabaha noocan ah (xaddidaadda iyo wixii la mid ah). Marti-gelinta dhinac saddexaad waa wax weyn haddii horumariyaha uusan u baahnayn inuu sameeyo wax qurxan. Waan qirayaa waan jeexjeexay maxaa yeelay runtii waa wax xaalad ah. Waxay sidoo kale kuxirantahay cabirka goobta, tiknoolajiyadaha la adeegsaday. Haddii ay weynaan doonto, tixgelinta shaqaalaynta qof shaqaale ah. Had iyo jeer ikhtiyaar maahan, laakiin amaan ayey u tahay waxyaabaha waaweyn.
3. Tani sidoo kale waa wax shirkadaydii hore ay qabatay. Waad bixi kartaa, waxay ku siin lahaayeen HTML-ka, sawirada iwm…. laakiin lambar la'aan. Koodhku wuxuu ahaa adeeg kiro ah asal ahaan. Taas markii la dhaho, waxaa jira lahaansho iyo lahaansho. Had iyo jeer waxaan sameeyay iib aan khaas ahayn. Asal ahaan, waxaan u baahanahay inaan awood u yeesho inaan dib u isticmaalo qaybaha aan ka kooban yahay. Wax dhibaato ah kuma lihi macaamilka oo iska leh, ku samaynaya waxa ay ku doonayaan iyo inuu qof kale ka shaqeeyo khadka hoose… laakiin anigu ma iibsan doono naftayda waana inaan dib u hagaajiyaa giraangiraha markasta.
4. Had iyo jeer. Had iyo jeer. Had iyo jeer.
May 18, 2008 at 5: 48 PM
Nice post… sifiican ayaa loo qabtay inkasta oo aanan ku raacsanayn hal shay (# 2):
"Waa wax aad u fiican in soo-saarahaagu uu yeesho shirkad marti-gelisa oo uu ku martigelin karo bartaada adiga, laakiin ha sameynin."
In kasta oo aan fahamsanahay caqliga ka dambeeya tan, haddana wax-soo-saar ayey noqon kartaa mararka qaarkood si loo amro in mashruucaaga lagu marti-geliyo meel kale. Haddii shirkadda horumarinaysa boggaaga ama abka ay leedahay barxad martigelin ah oo ay doorbidaan inay adeegsadaan, fursadaha ayaa ah inay u noqon doonto mid waxtar badan oo wax soo saar u leh inay adeegsadaan.
Intaa waxaa sii dheer, marka laga fiiriyo dhanka falsafada, haddii aad diido inaad ka faa'iideysato soo-saarahaaga martigeliyaha martigelinta maxaa yeelay ma dooneysid in lagu haysto "afduub", markaa tani waxay dejineysaa kalsooni darro bilowga ah. Hadaadan runti ku kalsoonayn horumariyahaaga inuu kugula martiqaado, markaa miyaad runti dooneysaa inaad lashaqeyso iyaga meesha ugu horeysa?
Waan ogahay sheekooyin badan oo argagax leh inay ka jiraan xaaladdan oo kale, laakiin guud ahaan waxaan kugula talin lahaa inaad diirada saarto helitaanka horumariye aad ku kalsoon tahay. Waad ka faa'iideysan kartaa martigeliyahaaga horumariyaha isla markaana waad ilaalin kartaa naftaada adoo codsanaya helitaanka maamulka iyo sameynta keyd kuu gaar ah.
Mar labaad, qoraal wanaagsan iyo macluumaad aad u faa'iido badan.
May 19, 2008 at 8: 56 AM
Waxay u ekaan kartaa arrin aaminaad laakiin uma maleynayo inay tahay - runti waa arrin xakameyn iyo masuuliyad. Haddii aad maalgashi aad u tiro badan ku sameyneyso horumarinta websaydhkaaga, markaa waa inaad hubisaa inaad xakamayn karto deegaankeeda.
Waxyaabaha ku dhaca ganacsiga ee xiriirka u jaraya uma baahna inay noqdaan kuwo taban. Waxaa laga yaabaa in soo-saarahaaga / shirkaddaada ay helaan macmiil aad u ballaadhan oo aan kaa bixin karin waqtiga. Laga yaabee inay badalaan ujeeddooyinka ganacsiga. Mararka qaarkood shirkadooda martigelinta waxay yeelan kartaa arrimo.
Waxaan kugula talinayaa inaad adigu xakameyso oo aad masuul ka noqoto martigelintaada si aad ugu tiirsanaato horumariyahaaga waxa uu ku fiican yahay - horumarinta!
Waan ku faraxsanahay dib-u-riixista, Michael.
Aug 19, 2011 at 12: 43 AM
Aniguba waxaan ahay soo saare barnaamij app ah, waxaanan filayaa inaad madaxa cidiyaha kaga dhufatay. Fikradaha qaarkood:
Waxaan u maleynayaa in inta badan qof walba uu ogolaan doono (oo wuxuu ku saleysan yahay faallooyinka hoose) # 1 waa mid waadax ah. Weligaa, weligaa ha sameyn. Weligaa. Xaalad kastoo jirta.
Waxaan ku haystaa aragti ka duwan # 2 marka loo eego laga yaabee qaar ka mid ah horumariyeyaasha ila midka ah: waxaan diidnay inaan martigalino badeecada kama dambaysta ah ee macaamiisheenna (dabcan, waxaan martigelinnaa server tijaabo ah oo loogu talagalay macaamiisha si ay u tijaabiyaan wadista alaabta inta lagu jiro horumarka) Waan ku faraxsanahay inaan ka caawinno macaamiisha inay isu diyaariyaan inay iyagu martigeliyaan ama helaan adeeg bixiye. Si fudud uma dooneyno inaan ku galno ganacsiga martigelinta. Hadday taasi ka dhigan tahay inaad shaqada ka jeedsato, ha noqoto. Waxaa jira shirkado martigelin badan oo waaweyn ama shirkado kaabayaal ah oo ka baxsan halka ay ku bixin karaan adeeggan qiimo aad uga jaban. Waxaan ku dhiirigelinaynaa in la socodsiin karo shaqadeena, waxaanan sameyn doonnaa wax kasta oo aan kari karno si aan u martigelinno, xitaa haddii macmiilku u beddelo bixiyeyaasha martigelinta sanado badan wadada.
# 3, macaamiisheennu waxay helayaan dhammaan koodhka isha ee alaabada ugu dambeysa oo leh hal digniin: Alaabada dhinac saddexaad ee loo isticmaalo xalka (sida kontaroolada shabakadda ee Telerik ama Qeybta Koowaad), waxaan siin karnaa macmiilka dll la soo ururiyey koontaroolka kooxda saddexaad (dheh shabag). Heshiisyadayada shatiyeynta ah ee lala galayo shirkadahaas saddexaad (oo aan siinno macmiilka) ayaa naga mamnuucaya inaan dib u qaybino koodhka isha ee noocyada kontaroolada noocaas ah, maxaa yeelay waa hantida aqooneed ee dhinacyada saddexaad, ma ahan annaga. Isticmaalka noocyadan alaabtu waxay macmiilka u keydineysaa waqti horumarineed waana wax aad uga raqiisan dhismaha wax isku mid ah oo laga bilaabo xoq. Waxaan horrey u nahay siyaasaddan ka hor inta aan wax shaqo ah la qaban. Dabcan, haddii macmiilku rabo inuu bixiyo horumarinta xakamaynta caadada (halkii uu ka isticmaali lahaa badeecada horay loo sii dhisay ee dhinaca saddexaad) waxaan ku siineynaa lambarka isha ee xakamaynta caadadaas iyo wixii kale oo dhan.
Marka ay timaado dib u adeegsiga koodhka, waxaan horrey u nahay xaqiiqda ah inaan dib u isticmaali karno qaybo ka mid ah koodhka haddii aan si qayaxan loo soo saarin gaar ahaan isticmaalka macaamilka (dheh hannaanka ganacsi ee lahaansho) ka hor inta aan wax shaqo ah la qaban. Haddii macmiilku doonayo inuu yeesho koodh gaar ah oo la horumariyo dabcan, taasi way heli karaan iyaga.
Sida kuwa kale yiraahdeen, # 4 marwalba waa lagugula talinayaa. Had iyo jeer!